VaMthuli Ncube Voronga Kupa Bazi reHutano Mari Shoma Pane Yariri Kuda
Bazi rezvehutano rakumbira paramende neChipiri kuti ione kuti rapihwa mari yakawanda pabhajeti regore rinouya mushure mekunge bazi rezvemari razivisa bazi rehutano kuti richawana mazana matanhatu ane makumi masere nepfumbamwe emamiriyoni emadhora, $689 million chete.
Asi bazi iri rakanga rakumbira bhiriyoni nemazana matatu emamiriyoni emadhora, $1.3 billion, inodiwa kuti bazi iri rikawanise kuita basa raro nemazvo.
Munyori mubazi rezvehutano nekuchengetedzwa kwevana, Dr Gerald Gwinjni, vaudza komiti inoona nezvehutano kuti huwandu hwemari yavari kuda mubhajeti regore rinouya, hwakaderedzwa nebazi remari riri pasi paVaMthuli Ncube nezvikamu makumi mashanu kubva muzana sezvo hurumende iri kufunga kuti bazi ravo richawana mari kubva kune dzimwe nyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira.
Dr Gwinji vati handi pese pavanobatsirwa nemari yakawanda nemasanangano anoshanda akazvimirira. Vatiwo zvakakosha kuti paramende ione kuti hurumende yaisa mari yakawana kumabasa ehutano.
Vatiwo munyika munogona kuita dambudziko guru kana masangano anoshanda akazvimirira akamira kubatsira bazi ravo nemari.
Vati zvakakosha kuti hurumende izadzisewo chiga cheAbuja Declaration chekuti dzihurumende dzinofanira kuisa zvikamu gumi nezvishamu kubva muzana zvemabhajeti adzo kuti hutano husimukire munyika.
Hurumende yave nemakore akawanda ichitadza kuita izvi vati.
Dr Gwinji vakumbirawo nhengo dzeparamende kuti dzibatsire bazi ravo kuitira kuti ripihwe mari yese yemutero weHealth Levy iyo inobatwa pese panotengwa Airtime yembozhanhare sezvo pari zvino riri kupihwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari iyi.
Vati vanotarisira kuwana mamiriyoni makumi mana nemasere emadhora gore rinouya kubva pamari iyi uye vanotarisira kushandisa zhinji yacho kumaruwa.
Dr Gwinji vati zvikamu makumi manomwe nezvisere kubva muzana zvemari yese yavachapihwa gore rinouya ichaenda kumihoro yevashandi uye haitokwani sezvo vachida kupinza vamwe vashandi vakawanda basa.
Vati makirinika nezvipatara zviri kuvakwa hazvina varapi uye vanoda kupinza vashandi zviuru zvitatu nemazana maviri nemakumi matatu, kubva pazvinzvimbo zviuru zvitanhatu nemazana masere ane makumi manomwe nezvishanu.
Vatiwo vanoda kuti hurumende itange kubhadharira vakweguri utsanana sezvo pari zvino vari kubhadharirwa nemasangano anoshanda akazvimirira ayo, asingashande mumatunhu ese munyika.
Nhengo yekomiti iyi, Amai Nomathemba Ndlovhu, vaudza Dr Gwinji kuti yavo haisi kufara nezviri kuitika muzvipatara zvakaita seKaranda kuMashonaland Central iyo inobatsira vanhu asi isina rubatsiro kubva kuhurumende.
Vamwewo vati havasi kufara kuti pane zvipatara zvizhinji zvakavakwa zvisati zvavhurwa pamwe nekuti vanhu vave kunzi vatenge mishonga nemadhora ekuAmerica ayo asiri kuwanikwa nyore munyika.
Dr Gwinji vati matambudziko esearipo nekuti hurumende iri kutadza kupa bazi ravo mari inorikwanira kuitira kuti ripe vanhu hutano hwakanaka.
Pari zvino hurumende inoisa zvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana mubhajeti rehutano, Global Fund inoisa zvikamu gumi nezvisere kubva muzana, kozotiwo mamwe masangano ndiwo anotora zvimwe zvikamu zvasara.